सरकारी कार्यालयको बेइज्जत, रक्सी पिएर टिल्ल छन् कर्मचारी ! [भिडियोसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
सरकारी कार्यालयको बेइज्जत, रक्सी पिएर टिल्ल छन् कर्मचारी ! [भिडियोसहित]
कास्की, कार्तिक २४ । जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका-३० पशु स्वास्थ्य केन्द्रका एकजना कर्मचारी सधैं रक्सी खाएर कार्यालय आउने गरेको घटना बाहिर आएको छ ।
कार्यालय सहायक रहेको उनी नियमित जसो कार्यालय समयमा रक्सी आएर आउने गरेका हुन् । सो कार्यालयमा अहिले उनी एक मात्रै कर्मचारी छन् । उनैले रक्सी खाएर आउँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । बाँकि हेर्नुस् तलको भिडियोमा-
याे पनि पढ्नुस ५६ सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ उपसचिव समायोजन
ट्याग्स: karmachari, Lekhnath mahanagarpalika